ဂျပန်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ နာမည်ကြီးတောင်ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲများ - JAPO Japanese News
ဂ်ပန္ဇာတ္လမ္းတြဲေတြကို ျပန္လည္႐ိုက္ကူးထားတဲ့ နာမည္ႀကီးေတာင္ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား
ဟူး 22 Jan 2020, 15:03 ညေန
ဂျပန်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ Mangaတွေကနေစတင်ခဲ့တဲ့ အရမ်းကိုလူကြိုက်များနာမည်ကြီးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ကိုရီးယား Drama & Series တွေက ရေပန်းအစားဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲဒီထဲကမှ ဂျပန်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Boys Over Flowers (F4)
“F4ချစ်သူ” ဆိုပြီး အရမ်းကိုနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲကိုတော့ မသိသူတော်တော်ရှားမယ်ထင်တယ်နော်။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ ကနဦးအစကတော့ ထိုင်ဝမ်ကပါ။ “Metor Garden”လို့နာမည်ကြီးတဲ့ တရုတ်F4ဆိုပြီးလူသိများပါတယ်။ ဒုတိယမြောက်ကတော့ ဂျပန်ဗားရှင်း“ Hana Yori Dango”၊ တတိယမြောက်ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာကတော့ ကိုရီးယားဗားရှင်း “ Boys Over Flowers(F4) “၊ စတုတ္ထမြောက်ကတော့ တရုတ်ဗားရှင်းအနေနဲ့ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ ဒီဗားရှင်းတွေထဲမှာတော့ တောင်ကိုရီးယား F4 ဇာတ်လမ်းတွဲက လူကြိုက်အများဆုံးပါ။
Japanese Version (Season 2) အနေနဲ့ဆက်လက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးပါ။မကြည့်ရသေးရင်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။အရမ်းကောင်းတယ်။
Playful Kiss (ဟန်ဆောင်အနမ်း)
ကိုရီးယားF4နာမည်ကြီးပြီးတော့ နောက်ထပ်ထပ်ထွက်လာတဲ့ F4ဇာတ်ကောင်ထဲကဂျီဟိုရဲ့ လူကြိုက်အရမ်းများခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ IQအရမ်းမြင့်တဲ့ခပ်ခပ်ချေချေကောင်လေးကို စာအရမ်းညံ့တဲ့ကောင်မလေးကတဖက်သတ်လိုက်ကြိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးပေါ့။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ Original ကတော့ Japanese Manga ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပထဆုံး ဂျပန်ဗားရှင်းက
“ Itazura Na Kiss” TV Series
It started withakiss (They Kissed Again) Taiwan Version TV Series
Playful Kiss (Korean Version) TV Series
ဒါကတော့နာမည်အကြီးဆုံးပေါ့. . .
Mischievous Kiss: Love in Tokyo (Japanese Version) TV Series
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ Season3 ခုရှိပါတယ်။
Kiss Me (Thai Version) TV Series
Mischievous Kiss: High School, Campus, the proposal (Japanese Version) Film
To the Beautiful You (ရင်ခုန်သံချာတိတ်)
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကလည်း Japanese Manga ကနေစတင်ခဲ့တာပါ။ ပထဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲအနေနဲ့ကတော့ ထိုင်ဝမ်ကစခဲ့တာပါ။
Hanazakarino Kimitachie(Japanese Version)
ဒါကတော့ တောင်ကိုရီးယားမှပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ နာမည်ကြီးတောင်ကိုရီးယားအိုင်ဒေါအဖွဲ့ EXOထဲမှ SuHo ကအဓိကပါဝင်ထားပြီးလူကြိုက်များတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ။
ဂျပန်ဇာတ်ကားတွေကနေ Remake ပြန်လုပ်ထားတဲ့ တခြားဇာတ်လမ်းတွဲတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ဒီဇာတ်ကားလေးတွေမကြည့်ရသေးရင် ကြည့်ဖို့လက်တို့လိုက်ပါတယ်နော်။
Kento Yamazaki ပါဝင္ေသာ ႐ုပ္ရွင္၊ဇာတ္လမ္းမ်ား !!!
မင္းသမီးေခ်ာေလး Mone Kamishiraishi ႏွင့္ Moka Kamishiraishi
Tokyo ၿမိဳ႕ေပၚက Anime ေတြ တကယ္ရွိတဲ့ေနရာ
နမ္းတဲ့ေနရာမွာ အဲဒိုေခတ္လူေတြအရမ္း “ Ro” ခဲ့ၾကတယ္ !!!
ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ကေနဖန္တီးထားတဲ့ အလန္းစား Vocaloid ေလးမ်ား
ၿဖိဳးေျပာျပတဲ့ တိုက်ိဳၿမိဳ႕နဲ႔ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ !!!
႐ုတ္တရက္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ အသတ္ခံခဲ့ရတဲ့အမႈျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။ ဂ်ပန္လည္းအႏၲရာယ္ရွိေနၿပီလား?
အဲဒိုေခတ္ မီးသတ္သမားေတြရဲ႕ အပ်ံစားဝတ္စုံ ဒီဇိုင္းမ်ား ！
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုကုစားေပးႏိုင္တဲ့ AI နည္းပညာစက္႐ုပ္ LOVOT !!!
Narita ဆိုေလဆိပ္ေလာက္ပဲသိၾကတယ္ ！သို႔ေသာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆာမူ႐ိုင္း႐ြာကေလးရွိေနတယ္ ！
ယန္း ၁၀ ဘီလီယံအေမြရထားေသာမိသားစုမွ ေမြးဖြားလာတဲ့ မေကာင္းဆိုးဝါး
ဂ်ပန္ဓားေတြ ဘာလို႔ထက္ ?!!!
My Neighbor Totoro ဇာတ္ကားထဲက လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားတဲ့ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာအခ်က္မ်ား…
မိန္းမေခ်ာေလးေတြဘာေၾကာင့္ AV အလုပ္ကိုလုပ္ၾကလဲ ?
Rurouni Kenshin ရဲ႕ေမာ္ဒယ္ျဖစ္ခဲ့သူ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့လူသား !!!!
Iwate စီရင္စုရဲ႕ ျမင္းလွည့္လည္ပြဲ Chagu Chagu Umakko Festival
အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္အေကာင္းဆုံးေမွာ္ဆရာ လက္ရွိခ်ိန္ထိ ထိုစြမ္းအားေတြရွင္သန္ေနဆဲ ?
ေယာက္်ားဆန္လြန္းေသာ အခမဲ့ထုတ္ကုန္ !!!